Umatshini okruqulayo: ubukhulu becala usetyenziselwa inkqubo ebalulekileyo ngaphambi kokuba izixhobo ezibandayo ziqhubele kumbhobho.
Ayinakutshintshwa kumzi mveliso wokulungisa ityhubhu, ngakumbi kumzi-mveliso wokubilisa ibhoyila, kumzi-mveliso wokupholisa, kwimeko yomoya exhasa umzi-mveliso kunye nezahlulo zeefektri. Isetyenziswa rhoqo kwimibhobho engenamthungo, njengetyhubhu yobhedu, ityhubhu yealuminium, ityhubhu yetyitanium, ityhubhu ye-nickel, ityhubhu ye-zirconium, ityhubhu engenamthungo, ityhubhu yentsimbi engenasici, ityhubhu yentsimbi engenasici, ityhubhu yokugqiba ityhubhu yovavanyo. Ihlala isetyenziselwa ukuvavanya ukonakala kwetyhubhu ye-capillary ngoxinzelelo lomoya malunga ne-0.3MPa ~ 0.85mpa, uxinzelelo lwamanzi kunye noxinzelelo lomoya lunezinto ezilungileyo kunye nezinto ezingalunganga. Umatshini womoya * unokuvavanya iziqwenga ezi-4, ukwahlula uhlobo oluzenzekelayo kunye nohlobo oluzenzekelayo; uhlobo lokuncancisa lwencwadana yemigaqo kunye nokungabinanto ngesandla zilungele i-1m-5m; uhlobo oluzenzekelayo * * lukhetha uhlobo oluzenzekelayo lombhobho omiselweyo, kuba izinto zokuvavanya zinde kakhulu kwaye akukho lula ukuzilayisha ukothule.
Ukuphuhliswa kwesinqumla sangqa esikhulu kuyahlangabezana neemfuno zetekhnoloji yokuguba
Ukugqitywa komphezulu wobubanzi obungaphandle betyhubhu yesibeleko esikhutshwe ngesandla yamkelekile. Ukuba umbungu wombungu ungqindilili, kunzima ukuhlangabezana neemfuno zelitye lokugaya. Kuba umaleko wombungu wangaphandle wombhobho ujiye kakhulu kwaye indawo yeembungu inzulu kakhulu, inokuqwalaselwa kuphela ngesixhobo esinzima. Ekuqaleni, inye kuphela okanye iziqwenga ezibini ezinokukhutshwa. Emva koko, ukusebenza ngokusebenza kuye kwaphuculwa kakhulu kwimveliso esebenzayo yenkampani yethu. Ukuphuhliswa kwamaqhekeza amathandathu, asibhozo kunye nobubanzi obukhulu besikhumba ngokuhambelana nenkqubo yemfuno yokugaya.
Rt-50fa Precision Double-Head Chamfering Umatshini / Round Tube Chamfering Machine
Fumana amaxabiso akutshanje Shiya umyalezo.
Min. Umyalelo / Isalathiso Ixabiso leFOB
Imveliso Isikhundla: 5000PCS / Year
Imiqathango Intlawulo: L / C, T / T.
Isiqinisekiso: CE, ISO
Indawo yokuQala: Zhangjiagang, China (Mainland)
Igama lebrand: HANRUI
Inombolo yomzekelo: Rt-50sm
Ubume bempahla: Umbhobho kunye neBar
Ububanzi bepayipi: 8-50mm
Umatshini wokucoca, izixhobo zokucoca ezisetyenziswa kumashishini ahlukeneyo zinokwahlulahlulwa zibe luhlobo lwediski, uhlobo lwebhanti kunye nohlobo lweplate
Izixhobo zokucoca ezisetyenziselwa amashishini ahlukeneyo zinokwahlulahlulwa zibe luhlobo lwediski, uhlobo lwebhanti kunye nohlobo lweplate. Okwangoku, kukho iipolisi ezimbini zediski kunye neepolishi zeediski ezilishumi elinambini, ezihlangabezana neemfuno zabathengi abohlukeneyo. Umcoci wediski kokonga umbane kunye nezixhobo zokucoca ukhuselo lokusingqongileyo umzi-mveliso wethu ucebisa ngamandla ngombhobho ongenamthungo, umbhobho wentsimbi engenasici, umbhobho we-titanium, umbhobho wenickel, umbhobho we-zirconium kunye nonyango lombhobho ogqityiweyo Esinye isixhobo ngumatshini wokucoca ibhanti, ojongana ikakhulu ukugqitywa komphezulu kunye nenqanaba lokuzoba ityhubhu enqatyisiweyo yokufezekisa ukusebenza okuphezulu kunye nokwenza ngcono ityhubhu.
Chip free ukusika umatshini
Umatshini wokusika wasimahla we-Chip: unokubizwa ngokuba ngumatshini wokusika umbhobho wentsimbi. Kufanelekile ukusika ixesha elinye kunye nokwenza umbhobho ojikelezayo, umbhobho wesikwere kunye nombhobho okhethekileyo. Isebenzisa inkqubo yokondla ngokubuyisa, ingaphelelanga kubude bombhobho, ngeqondo eliphezulu lokuzenzekelayo. Inokungenisa ngokuthe ngqo imifanekiso-ntathu, ichonge ngokuzenzekelayo umkhondo wokusika, kwaye isebenze ngokuchanekileyo nangokukhawuleza. Umatshini uxhotyiswe ngenkqubo esemthethweni ezenzekelayo, enokukhethwa ngokweemfuno zabathengi. Iinxalenye ezenziwa ngokulungiswa kwelaser akukho burr, umlomo omnyama, kwaye ubungakanani bemveliso efanayo bunokuhambelana okuphezulu.
Okwangoku, inkampani ijolise kuphando kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuveliswa kwezixhobo zombhobho ezingaqhelekanga. Ngoku iimveliso eziphambili ziyaphuhliswa kwaye ziveliswe: isitshisi, umatshini womoya, umatshini we-hydraulic, umatshini wokucoca, umatshini wohlobo lomatshini wokucoca ngokuchanekileyo, umatshini wokusika umbhobho ojikelezayo, umatshini wokuhambisa, umatshini wentloko ethe tyaba kunye nezixhobo zombhobho ezingaqhelekanga.
Umatshini ipolishi iziko
Kudala ithathelwa ingqalelo njengeyona ndlela inemveliso yokususa isitokhwe esinzima, ukugaya okungenasiseko kubonelela ngonyamezelo olusondeleyo kunye nokugqitywa komphezulu.
Iindidi zamaqela enxalenye zibanzi kwaye zibandakanya oku kulandelayo:
ukucheba kunye nokukhanya okukhanyayo
Cinga ukugaya okungenasiseko ukuze ulinganise kwangaphambili i-barbar yakho ngaphambi kokusebenza kwe-chucker okanye ukuvelisa izixhobo zomatshini. Iinkampani ezininzi zisisebenzisa ukubamba ubungakanani kwimijikelo ebandayo egqityiweyo ukuze ilingane iibheringi zebloko yomqamelo
Singabugaya bonke ubude beDayamitha engaphandle okanye "usike usile" inyathelo lokuya kwidayimitha encinci kwisinye kwisithathu ixesha elifunwa ziindlela zokugaya ze-cylindrical kwezi zinto zilandelayo:
intsimbi yekhabhoni kunye nentsimbi engenasici
i-aluminium kunye neelloys zayo
ubhedu kunye neengxubevange zayo
Ubhedu kunye neengqungquthela zalo
Iiplastikhi, nangona ingezizo zonke ezinokusila
iglasi kunye ne quartz